विपत्तिको घेराभित्रका चाडपर्व र विकृति - Pradesh Today विपत्तिको घेराभित्रका चाडपर्व र विकृति - Pradesh Today
विपत्तिको घेराभित्रका चाडपर्व र विकृति
विश्वका सयौँ देशहरू मध्ये नेपाल धर्मैधर्मको आस्थामा र मन्दिरै मन्दिरले भरिपूर्ण देशभन्दा पनि अत्युक्ति नहोला ?
हामी नेपालीहरूको कुनै दिन बिना पर्वको दिन हुँदैन । सयाँै जातजाति, सयाँै भेषभूषाले सजिएको हाम्रो देश नेपालको आफ्नै प्रकारका रितीरिवाज परम्परामा रमाउने संस्कृतिको देश सायद नेपाल मात्र होकी जस्तो भान हुन्छ ?
हामी नेपालीहरूले मान्ने विभिन्न चाडपर्वहरू मध्येमा दुईवटा दशैँ र तिहार पर्व हामी हिन्दू धर्मालम्बीको लागि अत्यन्तै महत्वपूर्ण र अत्यन्तै मुल्यवान त्यत्तिकै महंगो चाडपर्व हो । यो धेरै लामो पर्व पनि हो । १५ दिनसम्म दशै नेपालका मठमन्दिरहरू रगताम्य हुने र्गछन् ।
घरभरी मासुको थुप्रो हुन्छ । घरहरू रंगिएका हुन्छन् । मानिसहरू मात्तिएका हुन्छन् । साना बालबच्चाहरू कोही चर्खेपिङमा मस्त हुन्छन् । कोही जिउरे पिङमा हुइ सरर गर्छन् । असाध्यै गरीबको घर पनि भइ नभई ऋण धन गरेरै भएपनि दशैँको भिन्न प्रकारको रौनक देखिन्छ ।
हालको समय भन्नु नै धैर्यधारण आइपर्ने दुःख पीडाहरूको सामना गर्नुबाहेकको विकल्प देखिएन । हामी सबैले आ–आफ्ना स्थानबाट विपत्तिका घेराभित्रका चाडपर्व कसरी मनाउने ? भन्दा पनि यो महाविपत्तिको सामना कसरी गर्ने ? भन्ने तर्फ एकजुट हौँ । स्वयम् हामीबाट हुने विकृतीजन्य क्रियाकलाप जानी नजानी मलजल गर्नुभन्दा जति सक्यो यस्ता क्रियाकलापको निरूत्साहित गर्नतर्फ एकजुट हौँ ।
नयाँ–नयाँ कपडामा सजिएका, टिकाटालाको लागि सकभर नयाँ–नयाँ नोटहरू सटाएर राखियका बर्षभरीका दुःख, कष्ट बिर्सेर, टाढा–टाढा रहेका परिवारजन पनि दशैँ मानेर फेरी अर्को दशैँको भाका राख्दै गएका पनि घर फर्केका हुन्छन् ।
तर अहिलेको २०७७ को दशैँ जसरी पारिवारीक मिलनको भिन्न प्रकारका खुसीहरू साटासाट जसरी हुनुपर्दथ्यो त्यो हुन सकेन । दशैँमा घर जाउला पारिवारीक मिलन गरौँला, दुःख, सुख साटौला । बर्षभरीका दुःख, पीडा बिर्सेर सुख, रमाइलो क्षणिक भएपनि आनन्दको महसुस गराँैला भन्ने जुन चाहना थियो सबै चक्नाचुर बन्यो । कसैको घरमा रूवाबासी छ ।
कसैको घरका अग्रज लगायतका अन्य सदस्य क्वारेन्टाइनमा, भेन्टीलेसनमा धुकुुर–धुकुर प्राण अब की तब बाच्नेकी मर्ने बिस्तारामै छटपटाइ रहेको अबस्था बन्यो । बिरामीलाई आफन्तले न त भेट्नु छ, न त देख्नु छ, न त सञ्चो बिसञ्चो भौतिक रूपमा सोध्नु छ ।
आँखाभरी आँसु मनभरी त्रास बोकेर आफन्तकहाँ जाँदा पनि किन आए होला ? नआएको भएपनि हुन्थ्यो । भन्दै टिका लगाउनुभन्दा पनि छिटो पठाउने मै ध्यान पुग्यो । आफ्नै छोराछोरी, ज्वाइँ, नाति, नातीना अन्य आफन्त समेतलाई फोनबाटै आशीर्वाद भिडीओ कल गरेर आशिष दिनुबाहेक विकल्प भएन । यस्ता चाडपर्व मान्नुको कुनै अर्थ रहेन ।
हामी हिन्दू धर्मालम्बीहरूको अर्को दोस्रो ठूलो एवं महान चाडको रूपमा मनाइने तिहार भित्रिसकेको छ । यो पर्वलाई हिन्दूधर्मको मान्यताअनुसार दोस्रो दर्जामा मान्यता दिए पनि रमाइलोको दृष्टिकोणमा अति महत्वपूर्ण एवं मूल्यवान पर्व हो ।
यसमा प्राय दिदीबहिनी, दाजुभाइको आत्मीयता, सामीप्यता बढी हुने गर्छ । साथै कतै–कतै त हप्ता दिनसम्म भैलो, नाचगान, आ–आफ्ना भाषा, संस्कृतिका लोकभाका, वाद्यवादनमा गरिने रमाइलोको कारण पनि यो रमाइलोको दृष्टिकोणमा दशैँभन्दा तिहार झनै महत्वपूर्ण छ ।
प्राय मानिसहरू देश, विदेश, टाढा–टाढाबाट आउने प्रदेशीहरू र आफ्ना चेलीबेटी दशैँमा आएर तिहारसम्म बस्ने गर्दछन् । मानव जातिलाई प्रकृतिले पनि अति रमणीय समय, मौसम जताततै सप्तरंगी फूलहरूले ढकमक्क ढाकिएको अवस्था, घरभित्र पनि खाने वस्तुहरू भित्रिएको अवस्थाले पनि मानिस सम्पूर्ण पक्षबाट सुखको अनुभूति गरिरहेका हुन्छन् ।
यस्ता अति रमाइला, महत्वपूर्ण चाडपर्व, मेलामा प्रकृतीले हामी मानवमाथि त अन्याय अत्याचारै ग¥यो भन्दा पनि फरक नपर्ला ? आज संसारका धनाढ्य मानिने विज्ञहरूको देश भनेर चिनिने समृद्धशाली देशहरूको पनि रूवाबासी छ ।
संसारकै सर्वमान्य मानिसहरू पनि कोरोनाको सिकार बन्न बाध्य छन् । अर्थतन्त्र पूर्णरूपमा धरासायी भएको छ । यति लामो समयसम्म कलकारखाना, उद्योग, ब्यवसाय, रोजगार पूर्ण रूपमा ठप्प भए । कोरोनाको महाविपत्तिबाट आफ्ना देशका नागरिकको सुरक्षा गर्न खोज्दा अरबौ,
खरबौको नोक्सानी व्यहोर्नु पर्दा विश्व अर्थतन्त्रको धरासायी ध्वंश टाट पल्टिएको अवस्था छ । यति ठूलो बयान गरेर नसकिने अवस्था त कोरोनाको महाविपत्तिले निम्त्यायो । यसैमाथि झनै कृत्रिम अभाव, अमानवीय ब्यवहार, महंगी, कालाबजारी, भ्रष्टाचार, कमिसनको ज्यादतीले देश झनै आक्रान्त छ ।
विकृतिका रूप महगीं र कालाबजारीका रूपहरू
– जब कोरोनाको महामारीका हल्ला नेपालमा आउन थालेपछि त्यही दिनदेखि मास्कको कृत्रिम अभाव देखाएर त्यसैबाट पनी ब्रह्मलुट गरियो ।
– सेनीटाइजरमा अन्य विषाक्त वस्तु मिसाएर कुनै काम नगर्ने उल्टो असर गर्ने बनाएर त्यसैलाई पनि महंगोमा बेच्ने कुकृत्य गरियो । हाल बजारमा पाइने सेनीटाइजर कम्तीमा १८ प्रकारका सेनीटाइजर कामयापी छैनन ।
– राज्यले ठिक उल्टो काम गरेको छ । जतिबेला लकडाउन नगर्नु पर्दथ्यो त्यही समयमा लामो तरिकाको लकडाउन गरेर राष्ट्रको अर्थतन्त्रपूर्ण रूपमा ध्वस्त पार्ने काम भयो । राहतको नाममा ज्यादतीहरू प्रशस्तै भए । हाल लकडाउनको आवश्यक छ तर लकडाउन गर्ने वित्तिकै मानिस भोक, शोक, चिन्ताले झनै ठूलो विपत्ति निम्तिने अवस्था छ ।
– हाल नेपालको वास्तविक अवस्था रोगको त्रासभन्दा भोक, चिन्ता, त्रासको शोकमा मानिस त्रसित छन् । यही समयको मौका छोपेर दलाली बिचौलियाहरूका धन्दा फष्टिएका छन् । नक्कली सामान बेच्नेहरू मालामाल हुँदैछन् । तस्करीहरूले बृद्धबृद्धा नाबालक, भोकले सताइएकाहरूलाई आफ्नो नक्कली धन्दामा प्रयोग गरेका छन् ।
समाजमा विभिन्नखाले अनैतिक ब्यवहार गर्ने जुवाडे यो कोरोनाको महाबिपत्तिमा अति जुवाडेको बृद्धि भयो । साना बच्चादेखि ठूला नागरिक, राज्यका आधिकारीक ब्यक्तित्वसमेतको सहभागितामा जुवातासकोे बृद्धि भयो ।
झनै दशैँको समयमा टाढा–टाढा जाने नभएपछि तासमै समय खेर फाल्ने काम बढेर गयो । त्यसपछि रक्सी हालको समयमा समाज अत्यन्तै विकृतिमा फसेको छ । जसको प्रमुख कारण भनेको नै रक्सी हो । जाँड रक्सीको कारण समाजमा अकल्पनीय घटनाहरू घटेका छन् ।
रक्सीले मानिसलाई पागल बनाउँछ । जति मात्रामा मानिस रक्सी सेवन गर्दै जान्छ । त्यति नै मानिस उच्छृङ्खल गतिविधितर्फ उन्मुख हुँदै जान्छ ।
मानिस जब रक्सीको मात चढ्दै जान्छ । उसको ध्यान कोहीको झगडातर्फ, कोहीको ध्यान परपुरूष या महिलातर्फ जाने भएकै कारण कोही नाबालकतर्फ नाबालिकातर्फ आक्रामक शैलीमा उत्रिन्छ । यो घटना पुरूषको मात्र होइन महिला पनि आक्रामक हुने भएकोले उनीहरू पनि जो आफ्नो नजिकमा छ । त्यसैप्रति घटना घटाउन पुग्छ ।
कोही घरबाट बाहिर निस्कन्छ । मत्ताउदै सडकमा जाँदा झगडा, काटमार हरेक प्रकारका गतिविधिमा संलग्न हुने गर्छ । हाल नेपालको ठूलो समस्याको रूपमा लागूपद्धार्थ दुब्र्यसनी हुन गएको छ । यसबाट देशका होनहार युवायुवतीको संख्या यसैभित्र रूमलिएको छ ।
यसबाट हुने ठूला–ठूला बिकृतिमूलक घटना प्राय चाडपर्वमा त्यसमा पनि दशैँ र तिहार भनेका मासु र रक्सीकै पर्व होकी भन्ने जस्तो देखिन्छ । यसरी यी समयमा विकृतिहरू बढी हुने भएकोले र त्यति बेला प्राय खाने ब्यापार गर्ने दुबैको पहुँचमा बढी हुने भएकोले घटना पनि बढी हुने गर्छन् ।
एक त यो २०७७ सालको समय प्रकृतीले पनि मानव जातिमाथि विभिन्न बहानामा अति पीडा बनाएको छ । मानिस दिनप्रतिदिन बेरोजगारी भएका, पेशा, रोजगारबाट च्यूत हुनुपर्ने अवस्था बढ्दैछ ।
त्यसैमा पनि स्वयम् मानिसबाट घटाइने कृत्रिम घटनाबाट झन ठूला पीडा र अर्कोतर्फ गरिबीका चाङ, महंगीको मार सम्पूर्ण क्षेत्रबाट घेराबन्दीका आपतविपद्, दुःख, कष्ट, रूवाबासी, भोकशोक, त्रास भय वातावरण भित्रका चाडपर्वको कुनै अर्थ रहेन ।
हालको समय भन्नु नै धैर्यधारण आइपर्ने दुःख पीडाहरूको सामना गर्नुबाहेकको विकल्प देखिएन । हामी सबैले आ–आफ्ना स्थानबाट विपत्तिका घेराभित्रका चाडपर्व कसरी मनाउने ? भन्दा पनि यो महाविपत्तिको सामना कसरी गर्ने ?
भन्ने तर्फ एकजुट हौँ । स्वयम् हामीबाट हुने विकृतीजन्य क्रियाकलाप जानी नजानी मलजल गर्नुभन्दा जति सक्यो यस्ता क्रियाकलापको निरूत्साहित गर्नतर्फ एकजुट हाँै ।